အဘမန်း ဘာလဲ… ! အဘမန်း….ဘယ်လဲ ! | Democratic Wave
Posted by Demo Wave , at 10:15 AM0comments
လတ်တလော ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ မဖွံ့ဖြိုးသေးလို့ နိုင်ငံ တော်အစိုးရရဲ့ စီမံကိန်းကြီးများကိုသာမှီပြီး လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးတွေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အလုပ်လက်မဲ့တွေကို အဘမန်းသားတွေရဲ့ ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီ ၊ Red Link ကုမ္ပဏီကြီးတွေက အလုပ်ခန့်ပြီး တင်ကျွေးထားမယ်တော့မထင်ပါဘူး။ အလားတူ အခွန်တိမ်းရှောင်တာတော်တယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဘမန်းရဲ့ ခမည်းခမက် ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေကြီးလည်း ထမင်းကျွေးထားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
ဦးခင်ရွှေ့တစ်ယောက် နိုင်ငံတော်ကို နှစ်စဉ်ပေးရမယ့်အခွန်တွေမပေးတာကြာပြီလို့ နားနဲ့မဆန့်အောင် သတင်းတွေလည်းကြားနေရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေ အရပ်ရပ်မှာ အခွန်ငွေဟာအရေးကြီးသလို လစာတိုးပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ငွေအတွက် အခွန်တွေတိုးမြှင့် ကောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့အခွန်တွေကိုတော့ စီးပွားရေးသမားတွေက ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။